बढदो तनावसँगै टुटदो सम्बन्ध::DainikPatra
आर.आर हरिकृष्ण जोशी बैंकर
अहिलेको आधुनिक परिस्थितिमा तनावै नहुने भन्ने कुरा हँुदैहँुदैन । तनाव यस्तो चिज हो जसले धनी गरिब,ठूला,साना कसैलाई छोड्दैन । केही न केही र कही न कहीबाट तनाव आइहाल्छ । आज सोसल मिडियाहरु हेरौं,कसैलाई फोन गरो वा कोहीसित बसेर कुरा गर्न सुरु गरो के छ खबर भन्यो तनाव छ यार जिन्दगी भन्छ । कसैलाई सम्बन्धको तनाव,कसैलाई रोजगारीको तनाव, कसैलाई स्वास्थ्यको तनाव, कसैलाई समय व्यवस्थापन गर्न नसकेर तनाव, कसैलाई राजनीतिको तनाव त कसैलाई मान प्रतिष्ठाको तनाव । तनाव नभएको र मेरो जिन्दगीमा तनाव छैन भन्ने मानिस आजसम्म मैलदेखेको भेटेको छैन ।
हामी मानवजाति वरिपरिका साथीहरुलाई हेरे पनि आफै तनाव सृजना गरी दिन्छौ फलानोले गाडी घोडा किनो,पढाइ मामलाई जितो,जागीरमा मलाई उछेनेर अगाडि बढो,उसले मैले भन्दा बढि कमायो,फलानो ठाउमा घर घडेरी किनो यस्ता यस्ता कुराहरु जो अरुको बारेमा सोंचेर हामी आफै पनि मनमा तनाव सृजना गर्दछौ भने कहीलेकाही अधिक कामका कारण,वातावरणका कारण, साथी सङगतका कारण,घरयासी कारण लगायतका विभिन्न कारणहरुले तनावहरु उत्पन्न हुन्छ । त्यही उत्पन्न तनावहरुलाई व्यवस्थित नसक्दा पनि झन बढी तनावको दलदलमा फसी रहेका छौं ।
के हामीलाई मात्रै तनाव भएको हो त ? होइन तनाव भगवानहरुलाई पनि भएको थियो । हिन्दु धर्मका देवी देउतालाई हेर्नुस् गणेश भगवानको टाउको आफनै बुबाद्वार छेदन भयो,राम १२ वर्ष वनवास बसे, कृष्ण जेलमा जन्मे सितालाई रावणले हरण गरे,दुर्गा राक्षस हरुलाई नाश गर्न आफै मैदानमा आउन परो तर आज हिन्दु धर्ममा आस्था राख्ने हामी सबैले उहाँहरु पुज्छौं । उहाँहरु पनि जीवनमा तनाव भयो भनेर मात्र बसेको भए आज उहाँहरुलाई सबैले पुज्ने थिएनन् । आफ्नो कर्ममा निरन्तर लागिरहनु भयो र आई परेका समस्या तथा भोगेका तनावहरुलाई पार गर्नु भयो । हामीहरुलाई कहीलेकाहीं केहीं समस्या तनाव आयो भने मलाई समस्या भयो भनेर टाउको समाउने,साथीभाइ जम्मा पारेर मादक पदार्थहरु प्रयोग गर्ने,नियमित काम पनि नगर्ने र कतिपयले त मृत्युसम्मको निर्णय गरेका छन् । यही तनाव व्यवस्थापन गर्न नजान्दावानसक्दा समाजमा सम्बन्धहरु दिनप्रतिदिन टुटदै गएका छन् । एक आपसमा विश्वासहरु गुम्दै गएको छन् । जीवनमा समस्याहरु कहाँकति खेर आउन सक्छन त्यो हामी निक्र्यौल गर्न सक्तैनौ तर हाम्रो जीवनमा आएका समस्यालाई कसरी सामना गरेर समाधान गर्न सकिन्छ त्यो चाही हामी आफैमा निर्भर रहन्छ ।आउनुहोस तनावलाई कसरी समाधानगर्न सकिन्छ भने बारेमा एउटा कथाको साहारा लिऔं ।
एक दिन जागिरे छोरा आफ्नो बुवा बसेको ठाउँको नजिकै गई बुवालाई भन्छ । बुवामलाई सारै तनाव भयो एउटा समस्या समाधान गरो अर्को आउँछ अर्को समस्या समाधान गह्रोे अर्को आउँछ । मैले जागीर खान सक्दिन क्या भन्छ र बुबाले एक छिन छोराको मुखमा हेरेपछि त्यहाँबाट उठी छोरालाई पनि आफू गएकोतिर आउन भन्छन् र उनी सरासर किचनमा छोराका साथ पुग्छन् । तीनवटा भाडामा बराबर पानी हालेर एउटामा आलु दोस्रोमा अण्डा र तेस्रोमा कफी राखी ग्यास बाली तीनवटै भाँडो बेग्लै बेग्लै चुलोमा बसाल्छन् । अनि केही समयपछि आफ्नो छोरालाई ग्यास बन्द गरेर तीनवटै भाडा आफू भएको ठाउँमा लेराउन भन्छन् । छोराले सोही अनुसार गर्छ र छोरालाई पनि त्यही बस्न भन्छन् । उनले एउटा भाडाबाट आलु निकाल्छन् । छोरालाई दिंदै भन्छन छोरा यो पानीमा उमाल्नु भन्दा पहिला र अहिलेमा के फरक छ भन्छन् । अनि छोराले भन्छ बुवा पानीमा उमाल्नु भन्दा पहिला यो सारो थियो । अहिले गिलो भयो भन्छ र बुवाले फेरि दोस्रो भाडोबाट अन्डा निकालेर छोरालाई छडाउन भन्दछन् । छोराले छडाई सकेपछि बाबु उमाल्नु भन्दा अघि र अहिले उमाली सकेपछि के फरक पायौ अनि छोराले छन्छ बुवा यो उमाल्नु भन्दा पहिला तरल थियो अहिले सेट भएर ठोस भएको छ भन्छ र फेरि बुवाले कफी भएको भाँडोतीर देखाउँदै यसमा के परिवर्तन भयो त भनी सोध्छन् । अनि छोराले भन्छ बुवा यसमा राखेको कफी त पानीमा नै मिसियो नि भनेपछि बुवाले छोराको मुख हेरेर भन्छन् । छोरा यी तीन वटै वस्तुलाई हामीले बराबर पानी समान ताप र बराबर समय नै दिएर उमालेको तर तीनवटैको फरक फरक परिणाम आयो हो । हाम्रो जीवनमा पनि समस्याहरु आउँछ के समस्या आउँछ ? कतिखेर आउछ ? हामीलाई थाहा नहुन सक्छ तर जीवनमा आएका सबै समस्यासँग सामना गर्नु पर्दछ । कफी जस्तो सामना गर्न नसकेर पानीसँगै मिल्ने कि आलु जस्तो समस्यासित हार मानेर आफू गल्ने कि अण्डा जस्तो समस्याबाट आफू झन तगडा भएर सामना गर्ने तिमीमै भर पर्छ बाबुले यति भनेपछि छोरा बावुको कुरामा सहमत जनाउँदै आफू समस्यालाई समाधान गर्नतर्फ लाग्ने कुरा गर्दछन् ।